Mahazo mandeha bisikileta ve i Superman? - Bisikileta
Tena > Bisikileta > Bisikileta Superman - ny fomba hiatrehana
Bisikileta Superman - ny fomba hiatrehana
Mahazo mandeha bisikileta ve i Superman?
GRAEME OBREE, tompon-daka eran-tany teo aloha, dia nanao fanafihana mangidybisikiletafilan-kevi-pitantanana, ny iraisam-pirenenaBisikiletaUnion, taorian'ny fanapahan-kevitr'izy ireo handrara ny toerana aerodynamic fantatra amin'ny anarana hoe 'superman'izay noforoniny tamin'ny taon-dasa.
mitaingina bisikileta manondraka
Ireto ny zavatra faran'izay hafahafa indrindra, mahafinaritra, na tsara indrindra nandraran'ny UCI. Kodiarana spinergie. Ny pro manaja tena izay nitaingina cyclocross, na bisikileta an-tendrombohitra aza, tamin'ny tapaky ny taona 1990 dia tsy maintsy nanana kodiarana Spinergy.
Marina fa malefaka izy ireo, mavesatra, ary ny lelan'ny karbonina valo izay mandrafitra ireo lahateny ireo dia mety hahafaty azy, saingy mandraka androany dia mbola milay ihany izy ireo. Ny antony nahatonga ny fandrarana dia avy amin'ny bitro novonoina tamin'ny hazakazaka cyclocross ka hatramin'ilay tompon-daka eran-tany Paolo Bettini, izay nanapaka ny tanany tamin'ny fahalavoana ary nitaraina tamin'ny UCI, izay nandràra izany. Nifaly ny squirrels sy bitro erak'izao tontolo izao.
Ba kiraro lava. Eny, marina izany, ny UCI dia nijery olana momba ny fomba. Ny ba kiraro dia tsy tokony ho avo kokoa noho ny afovoany eo anelanelan'ny lohalika sy ny lohalika.
Ny hevitra dia ny hampitsaharana ny fampiasana stockings compression amin'ny fifaninanana, izay raha ny tena izy dia zavatra azontsika rehetra ifaliana. Nairo Quintana, na izany aza, dia somary akaiky ny fanitsakitsahana ny fitsipiky ny fitsapana ny fotoana amin'ity taona ity. Moto maivana.
Ny bisikileta maivana dia ny grail masina foana ho an'ny bisikileta. Tamin'ny faran'ny taona 1990, rehefa nanjary safidy safidy ny karbaona dia nanokatra tontolon'ny fahafaha-misakafo ho an'ny bisikileta haingana izy io. Saingy, tamin'izany fotoana izany dia tsy nisy ny fahalalana lalina momba ny fiaraha-miasa amin'ny karbaona ary ny UCI dia niahiahy momba ny fahamendrehan'ny fitaovan'ny fitaovana ary noho izany ny fiarovana ny mpitaingina azy.
Tamin'ny taona 1999, nampiditra lanjany kely indrindra 6,8kg ho an'ny bisikileta. 15 taona aty aoriana, mbola mipetraka io lalàna io, saingy mitohy milatsaka ny lanjan'ny bisikileta, noho izany ny mekanika matihanina dia mila manana lanjany fanampiny amin'ny bisikileta hitazomana izany.
Lasely tsy ambaratonga. Raha ny filazan'ny UCI, ny lasely mirona be loatra dia afaka manatsara ny fanatanjahan-tena ataon'ny mpitaingina azy amin'ny lafiny tsy azo ekena ary tsy maintsy ferana. Avoahy amin'izay ny fanahin'ny fanahy rehetra.
Tsy nahy, ny UCI dia mety namono taranaka ho avy matihanina ho an'ny matihanina, miaraka amin'ireo mpitaingin-tsoavaly marenina ankehitriny isaky ny mandeha am-pitsarana. Spinacis. Ireo must-haves hafa tamin'ny fiandohan'ny taona 2000 ho an'ny taranaka matihanina haingana indrindra hitantsika.
Raha ny tena izy dia aerobars an-tsary fotsiny no ahafahan'ny mpitaingina miditra amin'ny toerana fitsapana marina amin'ny bisikileta. Voarara satria raha ny marina dia tsy fantatsika ny antony.
Angamba Paolo Bettini nanisy tànana ny sasany tamin'izy ireo. Palitao orana mainty. Mpanohana ny ekipa Pro mandany vola an-tapitrisany maro hahazo ny mari-pamantarana azy amin'ny toerana malaza amin'ny lobaka ekipa.
Malaza, raha tsy rehefa avy ny orana, ny Pro Peloton iray manontolo dia mitafy palitao mainty ary toa dokam-barotra Castelli lehibe. Na izany aza, tsy avela izy ireo. Marina, voarara palitao mainty.
Ary henontsika avy amin'ny Inner Ringblog fa hampihatra izany tsy ho ela ny UCI. Voalazan'ny lalàna fa ny palitao ranonorana dia tsy maintsy mazava na miloko ekipa. Midika izany fa tsy afaka mampiasa gabbajackets malalany intsony ny ekipa sy ny mpitaingina azy.
Efa nanontany tena ve ianao hoe maninona no tsy hitanao eo afovoany ilay matihaninao tianao? Eny marina izany. Voarara ianao. Amin'ny hazakaza-dàlana dia misy lalàna milaza fa: 'Ny fonon-tànana dia tsy afaka mittens amin'ny banga iray, roa na telo fotsiny.' Manantena ny fitsipika mitovy amin'izany hampidirina amin'ny hazakaza-làlana atsy ho atsy mba hitazomana ity akanjo tsy misy fangarony ity hiala amin'ny peloton matihanina.
Bisikileta Aero. Ny bisikiletan'ny hazakazaka Lotus an'i Chris Boardman tamin'ny 1992 dia nanamarika ny fiandohan'ny revolisiona karbaona tamin'ny môtô, na eo aza ny fe-potoana fitsapana tsy mampino, manomboka amin'ny sabatra Pinarello ka hatrany amin'ny endrika tiana. Toa tsy nisy farany ny fampandrosoana raha tsy niditra an-tsehatra ny UCI.
Ny bisikileta dia tsy maintsy mahafeno fepetra isan-karazany amin'izao andro izao, ao anatin'izany ny refy efatra ka hatramin'ny iray amin'ny halalin'ilay fantsom-baravarana hatramin'ny halavany ary ny endriny fantsom-bozaka diamondra avo roa heny, izay midika fa tsy hijery bisikileta toa ny an'ny vanimpotoana intsony isika. Ilay 'Superman'. Raha mampiasa bisikileta Lotus vita amin'ny kraota farany ambony i Boardman, dia nifaninana tamin'ny ambaratonga mitovy tamin'ny bisikilety vita an-tanana fantatra amin'ny fampiasana ampahany amin'ny milina fanasan-damba i Boardman.
Noraisiny haingana tamin'ny toerany ny tuck iray ka nanampy azy handrava ny firaketana izao ora izao. Tsy niandry ela fa niditra an-tsehatra ny UCI handrara azy, fa Obree tsy niovaova niverina teo amin'ny tabilao ary namorona ny 'Superman'.
Inona no toerana misy ny Superman amin'ny bisikileta?
NY MAHARITRAPOSITION CYCLING
- Mety ho ny hafahafa indrindratoerana, izay ampiasain'i Michael Guerra no 'superman', izay misy ny fametrahana ny seza, miaraka amin'ny tongotrao aorianao.3. 2017.
Manana angovo ve ny mitaingina bisikileta?
Rehefa ianaomitaingina bisikileta, zavatra maro no mitranga izay mitakyANGOVOary fanovana izany. Manitsaka nybisikileta nomanova simikaANGOVO, natolotry ny famakiana ny sakafo laninao, ho mekanikaANGOVOmamily ny pedal. Ny simikany angovo diamety sy ny mekanikany angovo diakinetika.
Azonao atao ny milaza fa ny havizanana sy ny havizanana dia ampahany amin'ny bisikileta ary heveriko fa izy ireo, fa ny azontsika atao dia ny fanemorana ny fiandohan'ny havizanana ary ialao ny tetika sy toro-hevitra mba hahafahanao mandeha lava sy haingana kokoa, izao no tiako indrindra ary tsy ' tsy misy fiatraikany amin'ny bisikilety ity fa tsia, momba an'ity fa zazalahy, mba afaka matory miaraka amin'izay ianao, miankohoka, heveriko fa ho hitako tsara ianao amin'ny lahatsoratra manaraka, tsy ho potraka izany, ndao atomboka amin'ny iray mazava ho azy Satria izao ny ankamaroan'ny bisikileta na ny ankamaroan'ny atleta dia mifantoka amin'ny fampiofanana azy ireo. Koa satria ny ampahany lehibe amin'ny fitsaharana dia ny manamboatra sy manangana ny hozatra, mila miala sasatra ianao mba hihasalama sy hatanjaka kokoa. Koa alao antoka raha vao manomboka amin'ny fampihetseham-batana ianao na mpampiofana manokan-tena izay andaharanao amin'izao andro fitsaharana izao.
Ny zavatra hafa dia ny fihainoana ny vatanao, fantatrao fa raha mifoha mahatsapa ho mihozongozona ianao dia maka ny andro tsy fiatoana dia tsy ilaina ny manosika ny tenanao, tena hitondra soa ho anao ny fampiofanana rehefa miala sasatra ianao manamboatra ireo hozatra ireo ary hatsangana indray androany dia iray amin'ireo andro fialan-tsasatra nahafahako niala sasatra sy nankafizako ny feon'ny vorona teto izay ampiasainay hoe Whoops, ka tsara miaraka amin'i dan Jerry fantany daholo ny fialan-tsasatra ataoko 'Eny aho, eny, atsangano ny tongotrao, miala sasatra ary aza manome Tsy mahatsiaro tena ho meloka ianao, eny, raha mbola eo ianao, maninona ianao no miala fa tsy amin'ny alàlan'ny banky GCN fotsiny ny lahatsoratrao eto, mila fahitalavitra hanafana azy ireo aho, fomba iray tena mandaitra hanomanana ny vatanao sy hiadiana amin'ny fiandohan'ny ady havizanana dia afaka maharitra folo minitra maka tena tsotra fotsiny ny tsy maintsy ataon'ny pedal tsy watts betsaka ary karazana fanalefahana ny hozatra fotsiny, fa ny hafanana kosa dia tena mandaitra amin'ny fampiakarana ny hafanan'ny vatanao sy ny vongan-tsiraninao ao amin'ny metabolisma rehefa ianao manomboka manao zavatra tsara Makà fahazarana amin'ny fampiharana yoga na alina Ny fanitarana dia hanampy anao hiady amin'ny vokatr'io havizanana io, amin'izao fotoana izao dia nisotro kafe maraina aho ho an'ny yoga kely, misy yogis miala tsiny iray sy roa miala eo, saingy nampihatra an'io Activate core io aho, ary jereo ity, oh toy ny ityoga mahatsikaiky amin'ireny ranoka ireny dia tena ilaina tokoa. Matetika aho misotro tavoahangy iray ora iray alohan'ny fampihetseham-batana rehefa mandeha bisikileta. Matetika aho manandrana mifikitra amin'ny tavoahangy iray ary matetika mitsentsitra toy izao, manandrana manatanteraka ny tavoahangy ao anaty.
Ity ora ity dia tsara ihany koa tadidio, arakaraka ny hatsembohanao no ahazoanao bebe kokoa an'io sira io ary very ireo mineraly ireo. Tena ilaina tokoa ny mamerenanao azy io, noho izany ny hydration-nao ary eto no tena ilain'ireto zava-pisotro elektrolita ireto hahafahanao mahazo an'io amin'ny endrika atab na endrika vovoka izay tena mora ampiasaina atsipitsika ao anaty tavoahangy tavoahangy ianao tsy maninona. vonona ny tavoahangiko ho an'ny mitaingina toy ny prog. Ny famenoana solika miaraka amin'ny Aries dia tena zava-dehibe ihany koa mba hitazomana ny fikolokoloana ara-batana.
Aza adino, toy ny rehefa apetrakao lasantsy na lasantsy ao anaty fiara izay tsy hipetrahan'ny fiaranao ihany koa, rehefa mandeha tsy miasa izy ary tena mitovy ny vatanao ka azo atao ny mitazona sakafo sy lasantsy dia manoratra haingana kokoa ianao ary ho an'ny tena ilaina ihany koa ny fotoana lava kokoa, mihinana be loatra alohan'ny handehananao mitaingina toa anay ary hahatsapa ho malahelo be ianao ary hahazo fanindronana tsy dia mahafinaritra loatra koa manomezanao tena adiny iray na roa alohan'ny handehanantsika mitaingina bisikileta mihinana a. sakafo tsara ary avelao hiasa tsara ny rafitra fandevonan-kanina, arakaraka ny halavitry ny mitaingina ny sakafo tokony ho entinao miaraka aminao mba hahazoana antoka fa nanangona sakafo tsara ianao dia holazaiko fa zavatra iray dia ny hanafainganana ny ezaka ataonao. Aza manao ireo drafitra be pitsiny ireo. Great Roo dia mandeha mafy loatra tsy ho ela satria ny sisa tsy maintsy ataonao dia ny miady mafy mody any an-trano ka miasà ho any amin'ireo mitaingina lava kokoa ary mandeha tsara sy mora ary milamina ary ataovy izay hampiasaina toa ity solosaina bisikileta ity na fitaovana fanaraha-maso bisikileta. hanaraka ny halaviran'ny dia sy ny hafainganam-pandehananao.
Tena ilaina izany rehefa eo amin'ny làlana iray ianao mahalala tsara ny halavanao amin'izany làlana izany mba tsy ho mafy loatra ianao raha tsy ela dia haingana Ny fampiasana maso maso ny tahan'ny fo dia fomba tena tsara hitantanana ny fiezahanao koa ianao afaka mampiasa ireo faritry ny tahan'ny fo ireo hahitanao izay hatao amin'izany fampiofanana izany. Miezaha mafy mba hamerenako azy io fa tsara ho an'ny fiatoana aho dia fomba iray hafa tsara ahazoana antoka fa mijanona tsy mena sy mitantana ny havizanana ianao ka aza matahotra, henoy ny vatanao ary rehefa mahatsapa ianao fa reraka kely mandehandeha dia miala sasatra kely, mipetraha, miala sasatra indray amin'ny fofonaina, mivondrona indray ary avy eo afaka manao ny tsara indray ianao, maka hatory mandritra ny dimy minitra ary tiako ny mitaingina namana na vondron-toetrandro ny zavatra lehibe momba ny bisikileta dia fanatanjahantena ara-piaraha-monina ianao ka afaka manao fanatanjahan-tena tsara ary tsara ihany koa satria manelingelina anao amin'ny andraikitra apetrakao amin'ny tenanao ny tiako holazaina, niverina an-trano tamina dia fitsangatsanganana lehibe aho ary jereo fotsiny ny halaviriko. dia satria variana be tamin'ny resaka tiako holazaina, toa somary hafahafa izany satria izaho, 'irery aho ary milaza aminao aho mba hiaraka amin'ny namanao na hiara-hiasa vondrona fa raha ny tena izy dia miaraka aminareo aho amin'ny alalàn'ny ny fakantsary ary izaho koa manana ny fakantsary tsara tarehy mpamorona sarimihetsika ho anao ry zalahy ary misafidy fotoana tsara hiara-mitondra fiara amin'ny sasany tian'ny olona ny maraina, mahatsiaro ho taitra izy ireo, maheno ilay vorona fa miposaka ny masoandro ary mpanentana lehibe izy ireo, marina, ny hafa toa ny fiposahan'ny masoandro izay ahatsapany fa manana andro tsara izy ireo ary tian'izy ireo ny mijery ny filentehan'ny masoandro manao izay azo antoka mamerina mampitombo ny herinao rehetra ianao, tena zava-dehibe, izay holazaiko nefa, alavao ny alina rehefa vonona hatory ny vatanao ary ho ambany dia ambany ny herinao raha tsy hoe toa ahy ianao ary maka hadalana kely Fanamby mandritra ny alina dia hotehiriziko - maraina na vao harivariva, raha izaho ianao izao dia manaova fahazarana tsara ary manandrama mametraka ny sasany amin'ireto torohevitra ireto ary manantena aho fa hanampy anao kely izany raha nankafizinao ity lahatsoratra ity ary nanampy , alao antoka fa omenao tanana aho ary raha sendra zavatra tsy mendrika an'ity Youthink ato amin'ity lisitra ity aho dia ampahafantaro ahy ianao, fantatrao amin'ity fizarana fanehoan-kevitra etsy ambany ity ary heveriko fa hahita anao amin'ny lahatsoratra manaraka ianao, midika izany hoe mahafinaritra be izany voatifitra, jereo aho? Azonao atao ny mandefa anao vonona ianao yep yep eny somary manaitaitra tokoa avelao izany amin'ny manaraka, marina Ciao Bella oh izao ny lahatsoratra dia vita izany na ho an'ny dadako ao an-tranoko toa an'i dadako dadany
mpanamboatra bisikileta manokana
Iza no namorona an'i Supertuck?
Ny hevitra ao ambadiky nysupertuckdia ny fampitomboana ny tombony azo avy amin'ny aerodynamika rehefa midina midina. Ireo mpitaingin-tsoavaly elite dia nanandrana ny kinova an-taonany maro. Marco Pantani, tompon-daka italianina, dia nilalao tuck izay nahitana ny famindrana ny vodilaharany tao ambadiky ny lasely ary nivelatra ho an'ireo fitoeran-tànana hatramin'ny taona 1990 tany ho any.22. 2019.
Ny iray amin'ireo tantara lehibe indrindra tamin'ny Tour de France tamin'ity taona ity dia tsy ny hazakazaka, tsy ny fianjerana na ny teknika mihitsy. Chris Froome no mivoaka amin'ny bisikileta toy ny olona adala. - Aza mino anay? Eny, izy io, nitaingina ny Col d'Izoard, nipetraka teo ambonin'ny fantsony ambony, tamin'ny endrika aerodinamika be, fa adiny iray teo am-pamiliana. - Mandeha haingana be izany.
Eny, tsy izy no mpamily voalohany nanao an'izany, satria Matej Mohorič avy any Lampre-Meridad dia nahavita tsara tamin'ny fiadiana ny tompondakan'ny lalam-pirenena U23 azony tamin'ny 2013, saingy tsy dia nisy mpamily nanelingelina nanomboka teo - tsia ka maninona no nataon'i Froome izany? Ny tiako holazaina dia hoe mety ho haingana kokoa, fa ohatrinona haingana kokoa? Nanomboka nitaingina bisikilety tahaka ny adala i Dan mba hahitana izany - Hanao ilay fidinana midina isika. Ka handrefy ny halavan'ny fotoana hiainako avy any A mankany B mandritra ny familiana amin'ny fantsona ambony, ary avy eo rehefa tsy mametaka amin'ny fantsona ambony aho, ary avy eo rehefa mametaka ilay lasely amin'ny aero Position. Ny fihazakazahana rehetra dia manomboka sy mifarana amin'ny toerana iray ihany ary isaky ny mihazakazaka dia tonga amin'ny toerana manomboka 50 Ks isan'ora aho.
Mihazakazaha aloha, ary noho izany dia nisafidy ny toerana tiako tiako indrindra aho, mipetraka eo amin'ny lasely aho, fa amin'ny fametahana aero. (Hard rock mozika) Ankehitriny mandeha amin'ny laharana faharoa. Ity no mahaliana indrindra.
Mandeha tongotra mafy araka izay tratry ny heriko aho rehefa mipetraka eo ambonin'ny fantsona ambony. (Hard rock mozika) Ary ankehitriny ho an'ny hazakazaka farany, nipetraka teo ambonin'ny fantsona ambony, fa tsy tamin'ny pedal. Hatraiza no tena mahasamihafa azy? hery vitsivitsy avy amin'ny pedal? (Hard rock mozika) Eny, tsara, efa nanao fihazakazahana dimy isaky ny toerana aho ary nanodina ny toerana tsy tapaka ka tsy olana ny havizanana.
drafitra fanofanana bisikileta
Ka izao ny fotoana hiverenana any amin'ny birao ary hijerena ny valiny - Ka, ny valiny - Ny antony tsy namoahanay ny valiny teny an-dalambe avy any Dan dia satria nanana fotoana nifanaovana tamina trano fisotroana izy teo aloha .- Default. Na izany na tsy izany, eto izy ireo.
Ka ny valin'ny famoahana aero mahazatra rehefa mandeha pedal. Ny salan'isan'ny fidinana dia iray minitra sy 10 segondra. Ao amin'ny fantsona ambony, fa tsy amin'ny toeran'ny pedal, ny antsalany dia iray minitra sy 16 segondra ary avy eo ny Full Froome dia iray minitra sy 11 segondra, noho izany raha ny tena izy dia miadana kokoa noho ny auck tuck mahazatra - amin'ity tranga ity dia ny Froome -Position tena miadana.
Saingy nilaza i Dan fa tsy mitantara ny zava-drehetra ny antontan'isa satria afaka mitaingina ilay fantsona ambony ihany izy amin'ny 300 watt, saingy amin'ny fipoahana fohy fotsiny - tsy dia ratsy ho an'i Dan izany andro izany. 300 watt ho an'ny fipoahana fohy. - Fa na i Dan aza tsy afaka mahazo aina manokana ao amin'ny Ka mipetraka ny fanontaniana hoe azo ampiofanina ve izany? - Eny, henontsika fa mety nanao fampiasan-tena miafina tokoa i Froome tamin'ity toerana ity.
Rentsika izany avy tamin'i Dave B. - Eny, ary faharoa, ny zavatra tena zava-dehibe hafa dia ny fizarana diplaoma fiaviana; ny steeper ny fidinana, ny aer o dia tsy maintsy ho ianao, ary amin'ity tranga ity dia ny fianakavian'i Daniel dia 4% kely. Nefa tadidio fa raha mihalalina kokoa ny fihavianao ary mihamaro ny aerodynamika anao dia mety ho faty ianao.
Ary ny tiana holazaina dia hoe: maty.- Somary manahirana ihany. Fa misy ifandraisany izany, Si, satria aleo hiatrika izany, ity toerana ity dia mampidi-doza tokoa, saingy toa nikasa ny Team Sky ary fanahy iniana namolavola fork manokana ho an'i Froome io hetsika io.
Arosoy somary lavitra eo alohan'ilay bisikileta ilay fork mba hanintona kely ny fikirakirana, fa hanampy amin'ny fizarana milanja ny lanjan'i Froome amin'ny bisikileta. Froome's Pinarello koa dia manana fantsona ambony ambony noho i Dan's Trek. Izy io dia manana fantsom-bozaka ambony marindrano mifanohitra amin'ilay iray mitsivalana ao amin'ny Dan's Trek Madone.
ny fomba fanasana kilaoty fohy
Ka i Dan dia tena tokony ho tao anaty toerana tafahoatra sy ratsy toa an'i Froome. Tena mendrika ny jerena izany, sa tsy izany? Fa na ny fidinana any D'Izoard aza dia tsy ny teknika indrindra amin'ny fihazakazahana rehetra. Mahitsy izy, ka handeha miaraka amin'ity karazana fikafika ity.
Ary i Chris Froome dia nahafantatra tsara ny làlana ihany koa, ary koa, teboka iray izay tena zava-dehibe dia ny tsy fandraisana olona ao anaty fifamoivoizana- Tsia, ary amin'izay fotoana izay, raha mbola tsy nangoninao ny hafatray subliminaly nandritra ny lahatsoratra dia andramo azafady aza manao an'izany ao an-trano. - Ary i Chris Froome dia nilaza fa ny tenany taoriana kelin'izay tao amin'ny Twitter. - Tena nanao izany izy.
Na izany na tsy izany, raha te hifikitra amin'ny Tour de France ianao izao, raha mila atiny bebe kokoa amin'ity toetra ity ao amin'ny GCN ianao dia tsindrio fotsiny ny playlist Tour de France etsy ambony. Na zahao ny bisikilet'i Froome, ity dia mety tsy manana fork manokana ary tsindrio fotsiny eo io - Ary raha hisoratra anarana amin'ny GCN toy ny mahazatra, tsindrio ny tany izay misy an'io faritra io ary aza adino ny tsy tia sy mizara koa. - Yay!
Ahoana no ahombiazan'ny mpitaingina bisikileta mandritra ny Tour de France?
Miantehitra izy ireoamin'nymavitrikafamerenana.
Amin'nyandro tsy fiasana, marompitaingina bisikiletytorimasoamin'nysomary tara kokoa noho ny mahazatra, avy eo mitaingina 90 minitra eo ho eo amin'ny 10:30 na 11 maraina.nymampitombo ny fikorianan'ny rà ary mamoaka asidra laktika, izayafakamiteraka fanaintainana. Ny sasany mandeha lavitra na manipyamin'nysprintnyaza atao reraka ny tongotra, hoy i Reck.18. 2018.
Fa maninona no voarara ny toeran'ny superman amin'ny bisikileta?
Ny filan-kevi-pitantanana manerantany, ny Union Cycliste Internationale, dia nanjary niahiahy fa ny fanovana ny bisikileta dia nisy fiatraikany tsy mitovy amin'ny fitadiavana firaketana. Anisan'ny fepetra hafa, iovoararany mitaingina azytoerana: tsy nahalala izy raha tsy adiny iray talohan'ny nanombohany ny fifaninanana tompon-daka eran-tany tany Italia.
Iza no namorona ny Super tuck?
Ny hevitra ao ambadiky nysupertuckdia ny fampitomboana ny tombony azo avy amin'ny aerodynamika rehefa midina ambany. Ireo mpitaingin-tsoavaly elite dia nanandrana ny kinova an-taonany maro. Marco Pantani, tompon-daka italiana, nilalao atuckizay tafiditra tao amin'ny fanovana ny tendrony aoriana tao ambadiky ny lasely ary nivelatra ho an'ny kofehy toy ny tamin'ny 1990 tany ho any.22. 2019.
Mamitaka ve ny ebike?
Mandeha bisikileta amin'ny moterafangalana? E-bisikileta dia pedal-assist, izay midika fa moto elektrika kely no ampiasain'izy ireo hanamafisana ny herinaratra noforonin'ny fanodinanao manokana. Midika izany fa mitaingina ane-bisikiletambola mila mandeha an-tongotra ianao, izay mbola mila ezaka. Ary izany no antony tsyfangalanamitaingina ny herinao ianao sy ny bisikileta.
Fa maninona aho no mahatsiaro ho ambony aorian'ny bisikileta?
Ny fandinihana tamin'ny 2015 dia nahita fa aerobicFANAZARAN-TENAmampitombo ny haavon'ny ra anandamide, cannabinoid voajanahary. Cannabinoids dia misy fiantraikany amin'ny rafitra endocannabinoid, izaydiany ampahany amin'ny ati-doha izay misy fiantraikany amin'ny singa mazoto. Izany dia mety hanazava ny antony mahatonga ny olona marohahatsapailay malazaavo an'ny bisikiletamandritra ny dia lavitra.05.07.2017
Fa maninona no Supertuck no mampidi-doza?
Voalohany, izanyNAMPIDI-DOZA. Ny bisikileta dia natao ho an'ny lanjan'ny mpitaingina ny lasely fa tsy tongotra mandroso eo amin'ny fantsona ambony. Ary sarotra ny miverina ao amin'ny lasely nefa tsy mipoitra fohy ny orona. Ny vokany dia mety tsy ho maharary fotsiny fa mahamenatra.